अन्तत: सरिता गिरीकाे सांसद पद चैट, समाजवादी पार्टीले बल्ल गर्यो यति कडा कारवाही — Sanchar Kendra
१नेपाली जनताको हातमा अझै सत्ता आएको छैन भन्दै गर्जिए विप्लव, कसलाई के भने ? हेर्नुहोस विज्ञप्तिसहित
२नेपालले मलेसियालाई दियो २१८ रनको विशाल लक्ष्य
३एमाले कार्यालयमा तनाव
४विदेशी शक्तिको आडमा संविधान र मूल्य मान्यता मिच्ने काम भयो- प्रचण्ड
५एमाले कार्यालयबाट बालिका खड्का पक्राउ, यस्तो छ कारण
६माधव नेपालसँग वार्ता गरेको २४ घण्टा नबित्दै ओलीले गरे यस्तो खुलासा, नेता कार्यकर्ता आक्रोशित
७हुम्लामा वैशाखमा पनि हिमपात, स्थानीय दंग
८यी ५ देशका लागि नो अब्जेक्सन लेटर जारी गर्न बन्द, सूचनासहित
९कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा वैद्यले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?
१०भारतमा एकैदिन ३ लाख १५ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
११कोरोना सङ्क्रमणबाट पत्रकार अधिकारीको मृत्यु, कुन अस्पतालमा उपचाररत थिए उनी ?
१२चिनियां राजदूतलाई लक्षित गरी शक्तिशाली वि’स्फोट, चार जनाको मृत्यु, कसले लियो घटनाको जिम्मा ?
१काठमाडौँ उपत्यकामा लागु भयो यस्तो नयाँ नियम
२३ बुँदे सहमति उल्लंघन गर्दै ओली सरकारद्वारा नेकपा नेता गिरफ्तार
४‘बेनीको बजार जता माया उतै छ नजर’का गायक श्रेष्ठको निधन
५३ महिने बेसिक कम्प्युटर कोर्षको प्रमाणपत्र नहुँदा इन्जिनियरको आवेदन खारेज !
६आफुबिरुद्ध भ्रामक समाचार फैलिएपछि विप्लवको सचिवालयले मुख खोल्यो, हेर्नुहोस बिज्ञप्तिसहित
७विप्लवसँग ३ बुँदे सहमति भएको २ महिना नबित्दै गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई दिए यस्तो निर्देशन, के हो रहस्य ?
८म्यानमारमा सेनाले दमन बढाएपछि जापानले गर्यो यस्तो घोषणा
९घरेलु दर्शकको साथ पाएपछि नेपालले ३७ बर्षपछि उचाल्यो थ्री नेसन्स कपको उपाधि
१०गृहजिल्लामा किसानको गँहु काट्दै विप्लव, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोसहित
११मौसमबारे भर्खरै फेरी आयो यस्तो चेतवानी, सबैले थाहा पाउनुपर्ने, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
१२मेगा बैंक र भोटेवहाल तयारी पोशाक उत्पादन तथा बिक्रेता संघबीच सम्झौता
अन्तत: सरिता गिरीकाे सांसद पद चैट, समाजवादी पार्टीले बल्ल गर्यो यति कडा कारवाही
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले नेतृ सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । यससँगै गिरी सांसद पदबाट समेत पदमुक्त भएकी छन् । पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले गिरीलाई सांसद र पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बनेको ३ सदस्यीय कार्यदलले गिरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा उनलाई कारबाही गरिएको हो ।
पार्टीका सचिव मोहम्मद इतियाक राईले गिरीलाई पदबाट हटाइएको निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयलाई दिने निर्णय गरिएको बताए । गिरीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको भएको बताएकी थिइन् । उनले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध जनाएकी थिइन् ।
जेठ २७ गते समाजवादी पार्टीले निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो । तर, गिरीले असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । पछि संसदमा बोल्न नपाएपछि बैठककै बीच उनी संसदबाट बाहिरिएकी थिइन् ।
यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार भएको भेटवार्ता सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सउरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच झण्डै ३ घण्टा छलफल भएको हो ।
अध्यक्षद्वयओली र प्रचण्डबीच एक्लाएक्लै भएकाे छलफलमा स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्षबीच छलफलमार्फत नै विवाद समाधान गर्ने सहमति पनि भएकाे नेताहरुले बताएका छन् ।
यद्यपि अरू ठाेसरूपमा भने केहि सहमति हुन सकेकाे छैन । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट राजीनामा दिन नेताहरुले स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठाएपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि बैठक रोकेर दुई अध्यक्षले छलफल थालेका थिए ।
प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद छाड्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुबै पद नछाड्ने अडान लिएका छन् । विवाद समाधानका लागि २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका थप प्रष्ट पार्ने ओलीको प्रस्ताव छ ।
यसैबीच नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेताहरुसँगको भेटवार्ताको बिषयलाई लिएर नयाँदिल्लीमा भूकम्प गएको छ । यान्छीको राजनीतिक भेटघाटलाई विशेष चासोका साथ हेर्दै ‘नेपालमा चीनको बढ्दो हस्तक्षेप र नेपालको चीनप्रतिको झुकाव’ का रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्नुका पछाडि चीनको हात रहेको समेत केही कूटनीतिज्ञ र विश्लेषकले दाबी गर्दै आएका छन् ।
भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि नेपालले धार्चुला–लिपुलेक पास जोड्ने सडकको विरोध गरेपछि घुमाउरो पाराले नेपालले चीनको आडमा विरोध भएको दाबी गरेका थिए । नेपालका लागि भारतका एक पूर्वराजदूतले होउको सक्रियता चीनको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार भइरहेको दाबी गरे । ‘सधैं पञ्चशीलको वकालत गर्ने चीनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसरी खुलेर सक्रिय बन्नु सामान्य होइन, त्यसैले दिल्ली स्वाभाविक रूपमा चनाखो हुनुपर्छ’ उनले भने ।
केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउनाका पछाडि राजदूत होउको सक्रियतालाई ठानेका छन् । भारतीय हिन्दी दैनिक अमर उज्यालाले भारतको छिमेकी देश नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीतिक कारणका साथै चीनको कूटनीति पनि जिम्मेवार रहेको र त्यसका लागि राजदूत होउको भूमिका रहेको दाबी गरेको छ । पत्रिकाले राजदूत होउ फेसबुक ट्वीटर र इन्स्टाग्राममार्फत पनि नेपालहरूमाझ लोकप्रिय बनेको उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले पनि राजदूत होउले फेरि एकपटक नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको छ । एजेन्सीले राजदूत होउ र नेपालबीचको भेटघाटपछि नै जारी स्थायी समितिको बैठक बुधबारका लागि सारिएको दाबी गरेको छ । सत्तारूढ दलभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि चिनियाँ राजदूतले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको पीटीआईले लेखेको छ ।
त्यसैगरी भारतकै अर्को समाचार एजेन्सी आईएनएसले त राजदूत होउले काठमाडौंको कूटनीतिलाई नै पुनर्परिभाषित गरेको र भारतसँगको विवादित भूमिलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अनपेक्षित कदमका पछाडिसमेत हात रहेको लेखेको छ । ओलीविरुद्ध बढ्दो आक्रोश मत्थर पार्न अरू नेताहरूसँग भेटघाट गरेको समेत आईएनएसले लेखेको छ ।
यसअघि गत वैशाखमा नेकपाभित्र कलह चर्किएपछि राजदूत होउले गरेका राजनीतिक भेटघाट र विकसित घटनाक्रमलाई दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । त्यतिबेला राजदूत होउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत भेटेकी थिइन् । र, केही दिनको तनावपछि पार्टीको कलह थामथुम भएको थियो । त्यतिबेला पनि भारतीय विश्लेषक र मिडियाले राजदूत होउमाथि नेपालको राजनीतिमा हस्तेक्षप गरेको आरोप लगाएका थिए । राजदूत होउकै सक्रियताका कारण नेकपाभित्रको विवाद सुल्झिएको दाबी गरेका थिए
विदेशी शक्तिको आडमा संविधान र मूल्य मान्यता मिच्ने काम भयो- प्रचण्ड
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा वैद्यले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?
चिनियां राजदूतलाई लक्षित गरी शक्तिशाली वि’स्फोट, चार जनाको मृत्यु, कसले लियो घटनाको जिम्मा ?
सकियो प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालबीचको वार्ता, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के भयो सहमति ?
पार्टी फुटको संघारमा पुगेका बेला ओली र माधव नेपालबीच भेटवार्ता
एकाएक बालुवाटार किन पुगे योगेश भट्टराई ?
एकैदिन दुई हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएपछि देशभर तरंग, मोदीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया